Cats: Filimkii yaanyuuraha ee fashilmay - BBC News Somali
Cats: Filimkii yaanyuuraha ee fashilmay
Xigashada Sawirka, Universal Pictures
Taylor Swift waa mid ka mid ah xidigaha ka soo muuqday filimkaas.
Filimka laga sameeyay yaanyuuraha ayaa ku fashilmay in uu soo xareeyo dhaqaalihii laga filayay in lagaga helo Waqooyiga Ameerika iyo UK.
Filimkaas oo ay ku baxday $100m oo dollar, lana filayay in laba jibbaarka lacagtaas laga helo, wuxuu galay kaalinta afaraad, iyadoo meesha ugu sareysa uu gaaray filimka cusub ee Stars Wars.
Filimkaas waxaa UK iyo Ireland ka soo gashay $4.4m oo dollar, waxaana harreeyay dhalleeceyn.
Sida laga soo xigtay weriyaha gaarka ah ee Hollywood, qeyb dib loo cusbooneysiiyay ee filimkan Cats ayaa shineemooyiinka loo diray Jimcihii.
Waxaa la soo weriyay in soo saaraha filimka, Tom Hooper, uu amray in dib loo casriyeeyo filimka "laguna daro farsamo casri ah", kaas oo hadda diyaar u ah in markale la baahiyo.
Waxay aad ugu badan tahay in arrin aan caadi ahayn ay tahay in filim dhameystiran oo la sii daayay in sidan degdegga ah loo bedelo.
Filimka waxaa ku jira dhammaan jilaayaasha caanka ah sida Taylor Swift, Idris Elba, Rebel Wilson iyo Jason Derulo, waxaana muusikada u sameeyay Andrew Lloyd Webber.
Filimka Star Wars ayaa galay kaalinta koobaad wuxuuna ka dul maray Skywalker, Kaalinta seddaxaadna waxaa galay Jumanji.
Hooper, oo sameeyay filimka ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee The King's Speech, wuxuu noqday qof diyaar maareeyay oo keli ah in uu dhameystiro filimkiisii ugu cuslaa kaas oo maanta lagu soo bandhigayo New York.
Dame Judi Dench ayaa ka mid ahayd jilaayaasha
Filinkan Cats wuxuuna in uu fashilmo billaabay ka hor intaan la sii daynin, iyadoo dadka dhalleeceynayay ayba ku tilmaamayeen mid fashil ah, inkastoo dadkii daawaday ay uga falceliyeen baraha bulshada, ayna xoogaa amaanayeen.
Weriyaha Daily Telegraph, Tim Robey wuxuu ku tilmaamay in "dhibaatada, musiibadii ugu weynayd ee ka dhalatay, ay ahayd mid lama filaan ah", isagoo filimka aan wax xidig ah siinin.
Francesca Hayward waxay mataleysay yaanyuurta cad
Tafatiraha BBC ee arrimaha madadaalada, Will Gompertz wuxuu sheegay in inkastoo aysan la ahayn in Cats uu ahaa filim "baaba' ah", haddana in uu dareemay in Tom Hooper uu "lumiyay fursad qaali ah".
"Runta waxay tahay in filimka uu yahay sida bac oo kale, ma lahan quluub ama naf toona. Waxaa suuragal ah in taa ay tahay dhibaato la xiriirta meesha laga helay iyo ku haboonaanta ah in masraxa laga gudbo oo la geeyo shaashadaha waaweyn," ayuu yiri, isagoo filinka siiyay laba xidig.
Filimka cusub ee Sanjay Dutt oo Afghanistan iyo Hindiya iska horkeenay
Filimka cusub ee boqorka Muslimka iyo boqoradda Hinduuga ee muranka dhaliyay
Filim lagu tilmaamay "Masiixu-Dajaal" oo muslimiin badan ay ka xanaaqeen
Waxaa suuragal ah in xoogaa dhaqaale ah uu soo xareeyo ka dib marka laga baxo dabaaldegga ciidda masiixiyadda oo dadka ay isu soo diyaariyaan in ay madadaalo helaan.
Laba sano ka hor, Filimkii The Greatest Showman waxaa soo gashay illaa $8.8m markii la bahiyay, wuxuuna ugu dambeyn helay $435m oo dollar oo daafaha dunida uu ka helay.
Panipat: Filimka cusub ee Sanjay Dutt oo Afghanistan iyo Hindiya iska horkeenay
8 Disembar 2019
Dhakhtarkii qalliinka indhaha ee noqday hogaamiyaha ugu sarreeya Al-Qaacidda
Faransiiska oo qaaday tallaabo aan horey loo arag isagoo u jawaabaya Mareykanka iyo Australia